Edge Chromium yatodarika Firefox neSafari mumugove wemusika | Linux Vakapindwa muropa
Edge Chromium yatodarika Firefox neSafari mumugove wemusika. Kushamisika?
Makore mazhinji apfuura, browser raishandiswa zvakanyanya pasi rese raive Internet Explorer. Uye hazvisi kuti iye aive akanakisa, kure nazvo; yaingova chete default browser paWindows. Kunyangwe sevha yakashandisa. Mitemo yemutambo yakashanduka Google payakatanga Chrome yayo, iyo yave browser rekusarudza revashandisi. Kuti uwanezve kuvimba munharaunda yayo, Microsoft yakaburitswa Edge, asi izvi zvaive zvisina kukwana nekuti yaive yakavakirwa paEdgeHTML.
A "sorpasso" yakaitika munaKurume uyu. Muna Kukadzi, Firefox yaive ne7.57% yemugove wemusika, neEdge yakanamatira pairi ne7.38%. Muna Kurume, Edge inosvika kusvika 7.59% uye Firefox iri pasi kusvika pa7.19%. Pakupera kwa2019, bhurawuza reMicrosoft raingove pamusoro pe6% yemugove wemusika, saka tinogona kuvimbisa kuti zvine chekuita nenyaya yekuti ivo vakatanga kumisikidza browser ravo pa Injini yeGoogle, Chromium.
Microsoft Edge yakanaka neiyo Chromium injini
Pfuura chikamu chemusika che Chrome, ingangoita 70%, richava basa risingabviri, asi Edge angangoenderera nekuwedzera yako mumwedzi inotevera. Kuti yakavakirwa paChromium inokutendera kuti ushandise zvinowedzera kubva kuChitoro cheChrome uye kuti yakaiswa nekusarudzika zvinoreva kuti vazhinji havafanirwe kuisa yechitatu-bato software. Ichi chinhu chinoitika muApple masystem anoshanda, ayo anogara muSafari nekuda kwekubatanidzwa.
Chinoshamisa ndechekuti Internet Explorer enderera nemugove wepamusoro wemusika wakadai nhasi pa5.87%. Tsananguro yeizvi ndeyekuti webhu haisi kufamba nekukurumidza sezvazvinofanira uye kune mamwe mapeji achiri kuenderana chete neyekare Microsoft browser. Kana zvakanaka, ndizvo zvinotarisirwa nevashandisi vazhinji, nekuti Edge Chromium inoenderana neInternet Explorer.
Chero zvazvingaitika, zvinoita sekunge Microsoft yaita kufamba chaiko mukufamba kwayo kwazvino. Chii chichaitika pavanotanga su Linux vhezheni inoramba ichionekwa.
Mamwe Mashoko: Netmarketshare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Edge Chromium yatodarika Firefox neSafari mumugove wemusika. Kushamisika?
- Chrome ndeyechokwadi pa Android. Ndiani asingashandisi Android nhasi?
(nenzira yekushandisa IE kana uchishandisa Windows).
- Chromium yakavakirwa paiyo V8 injini uye kushandiswa kwayo kwakawedzera zvakanyanya nekuda kweJS neNodeJS.